Isiqondisi Sabathengisi Bezezakhiwo Ukuthengisa Nokuqasha kuvuliwe Realtyww Info
Abathengisi Bezakhiwo in Barrington
Abathengisi Bezakhiwo in Illinois
Abathengisi bezindlu in California
Abathengisi bezindlu in Rancho
Abathengisi bezindlu in Orange Walk
1 - 10 ka 57 Uhlu
Ishicilelwe ngu Juiste Makelaar
ukubuka Abathengisi bezindlu eshicilelwe 3 weeks ago
Ishicilelwe ngu Muzammil
ukubuka Abathengisi Bezakhiwo eshicilelwe 1 month ago
Ishicilelwe ngu Property Up
ukubuka Abathengisi Bezakhiwo eshicilelwe 5 months ago
Ishicilelwe ngu Ricky Carter
ukubuka Ukuhweba Ngezakhiwo eshicilelwe 6 months ago
Ishicilelwe ngu Vic Markarian
ukubuka Abathengisi bezindlu eshicilelwe 6 months ago
ukubuka Abathengisi bezindlu eshicilelwe 7 months ago
Ishicilelwe ngu Dick Sudduth
ukubuka Abathengisi Bezakhiwo eshicilelwe 9 months ago
ukubuka Abaphathi Bezakhiwo eshicilelwe 9 months ago
Umthengisi wezezakhiwo noma umthengisi wezezakhiwo (ngokuvamile obizwa ngokuthi umthengisi wezezakhiwo) ngumuntu osebenza njengomxhumanisi phakathi kwabathengisi nabathengi bezindlu / izindlu zangempela kanye nemizamo yokufanisa nabathengisi abafisa ukuthengisa nabathengi abafisa ukuthenga . E-United States, ubudlelwano babuqalwa ekuqaleni ngokubhekisela emthethweni ojwayelekile wase-English ejensi, lapho umthengisi enobuhlobo obuyimfihlo namakhasimende akhe. Umthengisi wezezakhiwo ngokuvamile uthola inkokhelo ebizwa ngokuthi yikhomishini yokufanisa ngempumelelo indawo yomthengisi nomthengi ngendlela yokuthi intengiso ingenziwa. Le khomishini ingahlukaniswa nabanye ababambiqhaza bezakhiwo noma ababambiqhaza ababambe iqhaza lapho kusebenza. Umenzeli wezezakhiwo, okuyigama elisetshenziswa e-United Kingdom, ngumuntu noma ibhizinisi lebhizinisi lakhe elithengisa ngempahla yendawo egameni lamakhasimende. Kunokwehluka okubalulekile phakathi kwezenzo, amandla, izibopho kanye nezikweletu zabathengi nabathengisi bezindlu ezweni ngalinye. Amanye amazwe athatha izindlela ezahlukahlukene zokukhangisa nokuthengisa impahla yangempela. E-United States, noma kunjalo, abathengisi bezindawo kanye nabathengisi babo abasiza abanikazi ukumaketha, ukuthengisa, noma ukuqashisa ngezindawo zokuhlala ngokuvamile kubizwa ngokuthi "ngabathengisi abangohlu" kanye "nabamele uhlu."  Abathengi abanohlu nabahlinzeki bafuna ukumaketha nokuthengisa noma ukuqashisa impahla ngentengo ephezulu etholakalayo ngaphansi kwemigomo etholakalayo engcono. Abanye abathengisi nabenzeli bangagxila ekumeleleni abathengi noma abaqashi. Kodwa-ke, ukunikezwa kwamalayisense njengomthengisi noma umthengisi kugunyaza umnikazi welayisensi ukumela izinhlangothi zombili izinhlangothi zomsebenzi. Ukuzikhethela ukuthi yiluphi uhlangothi oluzomela isinqumo sebhizinisi somnikazi welayisensi.